लकडाउनमा कब्जियत हुनबाट जोगिन कस्तो हुनुपर्छ दैनिकी ? – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १०:२९
गोपाल ढकाल , मनोविद
पचास बर्षिय एक पुरुषलाई लकडाउन पछि पाँच सात दिन देखि दैनिक दिसा नलाग्ने, दिशा भए पनि थोरै हुने, पेट फुल्ने ,दिसा गर्न अप्ठ्यारो हुने,पेट भारी हुने, पेटमा ग्यास बन्ने, पेट सफा नहुने ,असपट हुने, शरीर चंगा र छरितो नहुने,पेट कराउने, जस्ता कब्जियतका लक्षणहरु देखिए । कोरोनाको त्रासले आफु भयभित बैचेनी र तनाबमा रहेको समेत बताउदै मनोपरामर्शका लागि मनोबिदलाई फोन गरे। साथै आफुलाई पहिला देखिनै डर चिन्ताको मानसिक समस्या भएको जानकारी समेत गराए ।
लकडाउनको समयमा तपाईलाई पनि यस्तै कब्जियत वा पेटसँगका अन्य समस्याहरु त देखिएका छैनन ?
कब्जियत तथा पेटसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरु तनाव र चिन्ताको कारणले समेत हुनेगर्दछ।
कोरोनाको प्रकोप तथा लकडाउनले स्बभाबिक रुपले मानिसहरुमा मानसिक तनाव, डर , त्रास , चिन्ता बढाएको छ ।
तनावले पाचन थैलीबाट निस्कने ग्याष्टिक एसिडसहित विभिन्न हर्मोन र रासायनिक पदार्थको उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। मानसिक तनाव हुँदा शरीरबाट बिभिन्न खालका स्टेस हर्मनहरु निस्कन्छन ।
तनावले कब्जियत हुनुका साथै पेटमा ग्याँस उत्पन्न भइ ग्याष्टिकको समस्या समेत देखिन्छ सक्छ ।
तनाबले पाचन प्रणालीमा असर पुर्याउछ। जसको कारण पेट दुख्ने , कब्जियत हुने , पखला लाग्ने , वान्ता हुने वा पेटमा गडबडी हुने जस्ता समस्याहरु देखिन सक्छन ।
कब्जियत हुनुको अर्को कारण जीवन शैली खानपना पनि हो ।
कोरोनाको संक्रमणक‍ो कारण लकडाउन गरिएको अहिले अबस्थामा हाम्रो जिवन शैलीमा परिबर्तन आएको छ। केही असन्तुलित समेत हुन पुगेकोछ। असन्तुलित खानपान र जीवन शैली हुँदा लकडाउनको समयमा धेरैमा कब्जियतको समस्या देखिएको हुनसक्छ ।
हाँस्य कलाकार केदार घिमिरेलाई पनि एक पटक असाध्यै पेट दुख्ने समस्याले सतायो। पेटको जति नै अौषधि उपचार गरेपनि पेट दुख्न कम भएन। पछि उनलाई डिप्रेसन भएको थाहा भयो । डिप्रेसनको उपचार पछि उनको सबै समस्याहरु कम भएर गयो।
यहाँहरुलाई पनि यस्तै समस्यले सताएको भएमालकडाउको अबधिभरि फोन मार्फत निशुल्क मनोपरामर्श सेवाक‍ो व्यबस्था मार्क नेपालले गरेको छ । जसको लागि ९८१३५२७७३२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
( लेखक ढकाल मनोविद हुन । उनी मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत छन ।)